UXubuntu ufuna ukuvuselela imouse ye logo yakhe kwaye acele uncedo lwakho | Ubunlog
IPablinux | | Xubuntu
Bekusoloko kuthethwa njalo: Hlaziya okanye ufe. Nabani na okhe wacinga olo luvo kancinci kwiinyanga nje ezidlulileyo ube ngu Xubuntu, incasa Ubuntu esemthethweni kunye nemeko yemifanekiso yeXfce. Kwaye ayisiyiyo into yokuba bacinga ngotshintsho olukhulu, kodwa ukuba bafuna ukuguqula, phakathi kwezinye izinto, into ekudala ikunye nabo. Yintoni le ndithetha ngayo? Ukusuka kwilogo yakho, enye, njalo Ubhale kwi-Twitter, Bafuna ukuba isekwe kumfanekiso we-OS wokuqala.
Njengoko sifunda ngaphakathi ingxelo Kuthunyelwe kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, uXubuntu ufuna ukwenza utshintsho kumfanekiso wakho kunye nezo utshintsho luya kufika kwiXubuntu 20.10 U-Groovy Gorilla othe, nangona kuyinyani ukuba khange bakhankanye ngokuthe ngqo, bathi bayasebenza kwezinye iiprojekthi zobugcisa "zokukhululwa okulandelayo". Olunye utshintsho lunokuvela kwiingcebiso zoluntu, ngelixa ezinye ziya kuba sisiphumo sokhuphiswano.
I-Xubuntu 20.10 Groovy Gorilla iza kufika notshintsho kumfanekiso wayo
Ukuba ufuna ukufaka igalelo kwezimvo zobugcisa kwiXubuntu, ezinje ngemifanekiso emitsha yesilayidi yesilayidi, nceda ungenise izimvo zakho kuludwe lwe-imeyile lwabaphuhlisi beXubuntu kwingxoxo. Ukungenisa izimvo ezintsha kuluncedo ngakumbi ukusuka ekuqaleni kweNkqubo yoPhumezo nangaphambi kokuba i-UI ibambe, ehlala inyanga ngaphambi kokumiliselwa. Nceda uqaphele ukuba imiyalezo enezincamathiselo ezinkulu ziya kungena kulayini wokumodareyitha, ke kuyacetyiswa ukuba uqale nge-imeyile yokwazisa ngaphandle kweziqhotyoshelweyo.
AbaSebenzisi banokufaka izimvo zabo kumacandelo ahlukeneyo, phakathi kwawo Iimpawu ezimiselweyo zibandakanyiwe kunye nomxholo weGTK. Kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela: iqela lomphuhlisi likulungele ukumamela naziphi na iingcebiso, ezinje ngokuba kuboniswa xa kufakwa inkqubo yokusebenza, oko kukuthi, imifanekiso malunga nento esinokuyenza emva kokufaka iXubuntu.
Emva kwe- IXubuntu 20.04 Ngaphandle kotshintsho olukhulu lwezithambiso, ukukhutshwa okulandelayo kunokuzisa isimanga, kodwa kuya kufuneka silinde phantse iinyanga ezintandathu ukuze sizifumane zonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Xubuntu » I-Xubuntu ifuna ukuvuselela inxenye yomfanekiso wayo kwaye icele uncedo lwakho ukuba uyakwazi ukuyila
Git, faka le nkqubo yolawulo ku-Ubuntu 20.04